~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: March 2013
စကားကြွင်း။ ။ ဒီပို့(စ်)က တော်တော်တော့ နောက်ကျနေပါပြီ။ ရေးလက်စကြီးနဲ့ မပြီးတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့ကတည်းက ရုံးမှာ ပျားတုတ်နေလို့ လူရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းနေတာမို့ ကြာသွားပါတယ်။ မနေ့ကမနက်ကတော့ issue တွေရှင်းသွားပြီမို့ ဒီနေ့ ဒီပို့(စ်)လေးကို လတ်စသတ်လိုက်ပါတယ်။ To Continue Reading
Posted by witch83 at 5:56 PM No comments:
ဘယ်ဘာသာဝင်၊ ဘယ်လူမျိုးကမှ ကောင်းတယ်... ဘယ်ဘာသာဝင်၊ ဘယ်လူမျိုးဆို မကောင်းဘူးဆိုတာထက် တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီး ကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ်ဆိုတာမျိုးပဲ လက်ခံကျင့်သုံးသင့်၊ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မဆိုင်သူတွေကို ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးမလောင်းသင့်ပါဘူး။
"သူများ အကုသိုလ်၊ ကိုယ့်အကုသိုလ်"မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆမတူကြရင်တောင်မှ အားလုံးဟာ သက်ရှိလူသားတွေပါ။
အောက်ကစာသားတွေကတော့ ဆရာတော် ဦးကေသာရ ဆုံးမထားတာလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှထားတာပါ။ _/\__
၁ ) ဘာသာခြားကို သတ်ရင်လဲ ပါဏာတိပါတာ ကံထိုက်ပါတယ်။
ဘာသာခြင်းမတူလို့ ဆိုပြီး အကုသိုလ်က ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။
သူများအသိုက်အမြုံကို ဖျက်ရင် အကုသိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာမတူတဲ့လူတွေ ရဲ.အသိုက်အမြုံ မို.လို. ဆိုပြီး ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမထားပါဘူး။
( ၂ ) ဗုဒ္ဓဘာသာကို စောင့်ရှောက်ဖို.အတွက် သူတပါးအသက်ကို သတ်ခွင့်၊ သူတပါး အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီး ခွင့် ရှိတယ်လို. ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာ ဟောကြားမထားပါဘူး…..
( ၃ ) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ဟာ ရန်အပေါင်း ကို မေတ္တာဓါတ်နဲ. အောင်နိုင်တော်မူ ခဲ့တာပါ…
နာနာဂီရိဆင် ကို မြှားနဲ.ပစ်ပြီး အောင်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး…..
မာရ်နတ်ကို ရဟန်းသံဃာ အင်အားစု နဲ. တိုက်ပြီးအောင်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဘူး….
ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာတရား နဲ. အောင်နိုင်ခဲ့တာပါ…….
( ၄ )ရောင်းမှားဝယ်မှားကိစ္စမှာ မတရားဘူးထင်ရင် တရားဥပဒေအရဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစား ကြဖို.ပဲ ရှိပါတယ်….
မျက်လုံးတစ်ဖက် အတွက် မျက်လုံးတစ်ဖက် ပြန်ပေးကြေး ဆိုတဲ့ ဥပဒေသ အတိုင်း ကျင့်သုံးကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်မှ မကျန်မှ အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်……
( ၅ ) ခုတော့ဖြင့်….ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်ဖို.တဲ့ ပါဏာတိပါတာ ကံ ကို တက်တက်ကြွကြွကျူးလွန်နေကြတာ မေတ္တာတရား နဲ.အောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ရဲ.အဆုံးအမ ကို နာယူပြီး ဒေါသမီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်ပြနေကြတာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်နေတာလား…..နာမည်ဖျက်နေကြတာလားဆိုတာ ခဏလောက် စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး စဉ်းစားကြပါဦး….
( ၆ )ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ၀င်မသတ်ဘူး ၊ ၀င်မဖျက်ဘူးဆိုရင်တောင်…သတ်နေ ဖျက်နေကြတဲ့သူတွေ ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ ရောက်တဲ့ အပြုအမူအပြောအဆိုတွေ ကို မလုပ်မိဖို. ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်…
အကုသိုလ်ထဲ အမှုတွဲပါသွားမှာ စိုးလို.ပါ…..
( ၇ ) မေ့မသွားအောင် ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်..
ဘာသာတူတူ မတူတူ သူများအသိုက်အမြုံကိုဖျက်ရင် အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်….
( ၈ )ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတဲ့ တရားဟာ ဓမ္မတရား ဖြစ်ပါတယ်…အဓမ္မတရားမဟုတ်ပါဘူး..
( ၉ )မေတ္တာအစွမ်း၊ကမ္ဘာလွှမ်း ၊ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ။
အမှားနဲ့အမှန်ကို ကောင်းစွာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို လိုက်နာနိုင်ကြပါစေ။
Ref; https://www.facebook.com/ukaythara.sayadaw/posts/157364277761491 To Continue Reading
Posted by witch83 at 4:06 PM No comments:
Labels: Dhamma, Share
Posted by witch83 at 10:20 PM2comments: